Faradoboka 2019 :: Saika nofoanana noho i Fafah ny fampisehoan’ny tarika Mahaleo • AoRaha
Vaovao nanaitra ny mpankafy omaly ny filazan’ny tarika Mahaleo, tao amin’ny tambajotran-tserasera fa tsy ho avy hanatrika ny « Faradoboka Mahaleo », izay hatao etsy Antsahamanitra amin’ny 13 oktobra ho avy izao, indray i Fafah.
Raha ny fantatra, noho ny antony ara-pahasalamana no mahatonga ity mpana­kanto ity tsy hanafana ny lanonana, amin’io fotoana io. Naneho ny fialan-tsiny izy ireo. « Tsy tsara ny fahasalaman’i Fafah ka izay no nahatonga ity fara­doboka ity tsy hisy azy. Eo am-pikarakarana ny hiverenany anatin’ny fahasalamana tanteraka ny rehetra ankehi­triny. Raha ny tena nety taminay, dia nofoanana ny fampisehoana kanefa tsy mety izany ho an’ireo mpankafy izay efa sasa-miandry. Tsy tokony ho fantany akory mantsy hoe mihira izahay satria vao mainka miasa ny lohany ka hihombo ny aretiny. Ny hany azonay atao dia niantso mpanakanto hafa hanampy anay anatin’ny fizarana fahatelon’ny fampisehoana izay atao », hoy i Bekoto, mpikambana ao amin’ny tarika Mahaleo.
Nanambara ihany koa ny avy eo amin’ny Gasy Events, mpikarakara ny hetsika fa « tsy hisy ny fanovàna, fana­fo­anana na fanemorana ny fiakarana an-tsehatra izay ho­tanterahina». Raha ny fanampim-baovao avy amin’ny tarika dia hanolotra hira vaovao izy ireo amin’io 13 oktobra io.
Tsiahivina, fa tamin’ny tapatapaky ny taona 2018 no efa tsy tazana niaka-tsehatra niaraka tamin-dry Dama, Charles, Dadah ary Bekoto i Fafah. Tonga tany Antsirabe kosa izy nandritra ny rindra-kira nataon’ny tarika farany saingy tsy afaka nihira. Fototra anefa ity mpanakanto ity ao amin’ny tarika Mahaleo noho izy misongadina amin’ny fananana feomanga sady miavaka.
Anisan’ny ankafizan’ny maro an’i Fafah ny vazivazy sy ny fihetsika miteraka tsiky fanaony rehefa miaka-tse­hatra. Ankoatra izay, mitsinjo ny dimy taona ho avy sahady ny tarika Mahaleo. Tsy mipe­trapetraka mihitsy ry Bekoto sy ny namany fa mitady zava-baovao ho an’ny mpankafy hatrany izy ireo. Fantatra mantsy fa eo am-panomanana ny faha-50 taona nijoroany sahady izy dimy mirahalahy mandrafitra ny tarika ankehitriny.
Tontolon’ny hiragasy :: Hahatsiaro manokana ny nahafatesan-dRamilison Besigara ireo taranany
Fampisehoana etsy Mamahasina :: Ho vahiny manokan’ilay mpanakanto frantsay i Shyn